‘लकडाउन’ र कर्फ्युमा के फरक, ‘लकडाउन’ उल्लघंन गरे कस्तो कारवाही हुन्छ ? - Image Khabar
‘लकडाउन’ र कर्फ्युमा के फरक, ‘लकडाउन’ उल्लघंन गरे कस्तो कारवाही हुन्छ ?
प्रकाशित मिति : 24 March, 2020 7:49 am
न्यायालयमा देखिएको विकृतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्चमा अध्ययन समिति गठन
काठमाडौं, साउन ३० । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले पुन: अध्ययन
कर्णाली नदीको बाँध भत्कियो
बर्दिया, साउन ३० । बर्दियामा कर्णाली नदीको तटबन्ध भत्किएको छ । बाँध भत्किएपनि नदीको सतहभन्दा
लिदी पहिरो : ५ जनाको शव फेला, ३३ बेपत्ता
सिन्धुपाल्चोक, साउन ३० । जुगल गाउँपालिका– २ गोल्चे, लिदीमा शुक्रबार बिहान खसेको पहिरामा परी मृत्यु
काठमाडौं, साउन ३० । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले ‘ए’ लेभल कोर्षमा पठाएको नतिजा फरक परेको भन्दै विद्यार्थीहरुले
सिन्धुपाल्चोक जुगल–लिदी पहिरोमा पुरिएका सात जनाको मृत्यु, ३१ बेपत्ता (सूचीसहित)
सिन्धुपाल्चोक, साउन ३० । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका लिदीमा पहिरोले ३७ घर घर पुरिँदा ७ जनाको
सलहका कारण प्यूठानका किसान हैरान, ५ सय हेक्टरमा लगाइएको बाली नष्ट
राजेश, जीसी इमेजप्युठान । सलहले प्यूठान नछाड्दा प्यूठानेली किसान चिन्तित भएका छन् । पछिल्लो समय